मन्त्रिमन्डल हेरफेरका साथै केहीलाई हटाएर नयाँ ल्याइने | eAdarsha.com
मन्त्रिमन्डल हेरफेरका साथै केहीलाई हटाएर नयाँ ल्याइने
पोखरा, २७ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री मण्डल गठन गर्दा प्रभावकारी काम गक्ने जस्ता व्यक्ति छाने तर ती मध्ये ५० प्रतिशत मन्त्रीले मन्त्रालयमा कुनै कामै देखाउन सकेनन् ।
दुई तिहाइको बहुमतबाट बनेको सरकार छ, त्यो पनि प्रभावकारी काम नहुँदा आम नागरिक असन्तुष्ट छन् । अघिल्लो कार्यकालमा प्रभावकारी काम गरेको भनिएका लालवावु पण्डित र गोकर्ण विष्टले समेत मन्त्रालयमा प्रभावकारी काम देखाउन सकेनन् ।
केही मन्त्रालयको काम प्रति असन्तुष्ट प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री केपीओलीले मन्त्रिपरिषदमा ठूलै हेरफेर गर्ने गरी नयाँ मन्त्रीहरूको सूची तयार गरेका छन्।् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित शीर्षनेताहरुसँगको परामर्शपछि अर्को साता मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने भएका छन् । कम्तीमा ८ जना मनत्री हटाइने र केही प्रभावशाली नेताहरु सरकारमा सहभागी गराइने बतायएको छ ।
अध्यक्षपछिको कार्यकारी पद महासचिव भएकाले भर्खरै पार्टी एकीकरण टुंगिँदै गरेकाले पौडेल सम्पूर्णरुपमा पार्टी काममा खटिने उनीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । पौडेल मिसनकेन्द्रित व्यक्ति भएकाले जुन जिम्मेवारीमा हो, त्यहीँ सफल हुने गरी खटिने उनको भनाइ छ ।पछिल्लो समय नेकपा पंक्तिमा महासचिव पौडेल अर्थमन्त्री हुने चर्चा चलेको छ । पौडेल र सुवास नेम्वाङ दुवै नेताले आफूलाई मन्त्री नबनाउन प्रधानमन्त्रीसँग यसअघि नै आग्रह गरेका थिए ।
को–को हट्ने भए ?
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थममाया थापा, युवा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ र उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवलाई विदा दिने तयारी गरेका छन् । श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, अर्थमनत्री युबराज खतिवडा हटाउने तयारी भएको छ । उपेन्द्र यादव पनि यही महिनाको अन्त्यमा सरकारबाट हट्ने तयारी गरेका छन् ।
नेकपा स्रोतले भन्यो, कतिपय मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर हुनेछ । कम्तिमा ६÷७ जना मन्त्रीलाई विदा दिएर केही अनुभवी र केही नयाँलाई जिम्मेवारी दिने गरी छलफल भइरहेको छ । सम्भवतः उपचुनावअघि नै एक साताभित्रमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने छन् ।
काे–कोे बन्दैछन् मन्त्री ?
प्रधानमन्त्री ओलीले तयार पारेका सूचीअनुसार प्रभावशाली नेता धनश्याम भूसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, सोमप्रसाद पाण्डे, पार्वत गुरुङ र शिवमाया तुम्बाहाम्फे पूर्वएमालेबाट मन्त्री बन्ने सूचीमा छन्। शिवमायालाई उपसभामुखबाट राजीनामा गर्न लगाएर मन्त्री बनाउने तयारी छ।
पूर्वमाओवादीबाट मन्त्री बन्ने सूचीमा अग्नि सापकोटा, लेखराज भट्ट, पम्फा भुसाल, रामेश्वर राय यादव, देवेन्द्र पौडेल छछन् । सापकोटा सभामुखका आकांक्षी भए पनि उनलाई मन्त्री नै बनाउने तयारी भएको बुझिएको छ।
मुख्यमन्त्री पनि हेरफेर
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन लगाएकै शैलीमा सबै मन्त्रीको राजीनामा मागे भने उनले पुनः ल्याउन चाहे पनि केहीले मन्त्री नबन्ने संकेत दिएका छन्।
निरन्तरता पाउने सूचीमा रहेका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीको राजीनामा माग्नुभन्दा जुन÷जुन मन्त्रीको कार्यसम्पादन चित्त नबुझेको हो उनीहरूको मात्र माग्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। सबैको राजीनामा गराएर फेरि ल्याउदा राम्रो काम गरेका मन्त्रीहरूको सम्मान नहुने र उनीहरूले सहज महसुस नगर्ने मत छ।
खानेपानी मन्त्री विना मगरको कामप्रति पनि प्रधनमन्त्री केपीको चित्त बुझेको छैन तर प्रचण्डकै दवावमा उनलाई खानेपानीमनत्रीबाट राजीनामा दिएर अन्य कुनै मनत्री दिने तयारी पनि भएको छ । प्रचण्डकी वुहारी भएकै कारण उनी मनत्रीबाट हट्ने सूचिमा परेपनि खानेपानी मन्त्रालयमा अन्य कामगर्न सक्ने मन्त्री लगेर उनलाइृ अन्य कुनै मन्त्री बनाउने तयारी भएको छ । विनालाई मन्त्री बनाउनकै लागि प्रधानमन्त्रीले सबै मनत्रीलाइृ राजीनामा दिन लगाउने तयारी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालले मन्त्रिपरिषदपछि केही मुख्यमन्त्री पनि हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन्। सातमध्ये अहिले ६ वटा प्रदेशमा नेकपाका मुख्यमन्त्री छन् । बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद नेपाल भ्रमणमा आएकै कारण ओलीले यसलाई केही दिन पर धकेलेका हुन्।
बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद ढाकाबाट मंगलबार चारदिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौं आएका छन् । समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्ने तयारी गरेकाले प्रधानमन्त्रीले उनको निर्णय पनि पर्खेका छन् । ससमाजवादी पार्टीको यही २८ गते वस्ने केन्द्रीय समितिको वैठकले सम्मवत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिर्दै सरकरावाट वाहिरिने छ ।
मुद्रण उद्योग महासंघ गण्डकीको सम्मान